Israel oo si kas ah DAAD ugu fatahdey beeraha Falastiin qaarna dhoofkii u diiddey + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Israel oo si kas ah DAAD ugu fatahdey beeraha Falastiin qaarna dhoofkii...
Israel oo si kas ah DAAD ugu fatahdey beeraha Falastiin qaarna dhoofkii u diiddey + Sawirro
(Marinka Gaza) 09 Feb 2020 – Muddo 5 bilood ah, waxay beeraleeyda Marinka Gaza ay waraabinayeen beerohooda, iyagoo quud darraynayey inay dalaggooda gurtaan dhamaadka Jannaayo.
Yeelkeede, dadaalkoodii oo idil waa hal bacaad lagu lisay, kaddib markii ay Yuhuuddu biyo si kas ah ugu soo fataheen beerohooda khudaarta ee xadka u dhowaa.
Sida ay sheegtay Wasaaradda Beeraha Falastiin, Israel ayaa biyo xireen dhankeeda ku yaalley ku faarujisay dhul beereedka Falastiiniyiinta Gaza oo joogey xilligii fasalka gurashada.
Arrintan ayaa keentay in ay khasaaraan nus milyan ($500,000) doollar kaddib markii ay daadadkan macmalka ihi qaadeen dhul beereed gaaraya 332 hektar, bishii Jannaayo oo qura.
Dhul beereedka Gaza ayaa u badan mid u dhow xadka ama gidaarka ay Yuhuuddu halkaa ka dhistay, waana halka ay quudka kasoo saartaan reer Gaza oo go’doonsan iyo qoysaska ku nool, gaar ahaan dhanka miraha iyo khudaarta.
Israel ayaa sidoo kale bilowday inay soo celiso khudraddii ay Falastiiniyiinta Daanta Galbeed dibedda u dhoofin jireen, gaar ahaan middii mari jirtey dhanka dalka Urdun.
Previous articleDamaca PUNTLAND iyo dayrada Nabad iyo Nolol (5 qodob oo laga calaameeyay dabuubtii Deni)
Next articleTurkiga oo tikniko dheeraad ah ku xoojiyey ciidamada ka jooga Suuriya (Dagaal ay la geli karaan kuwa Asad)